Ezemidlalo Ukudla Ukulahlekelwa isisindo On porridges Ibhaluni leParele
Uma umzimba wakho ungaphelele futhi isisindo asivamile, ngakho okokuqala kudingeka uqaphele umzimba wakho, nawo wonke amandla ukuze uwaqondise ukuze alulame futhi abuyise ekujwayelekile. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa ukudla kweparele. Uma ufuna ukuba namafomu aphelele, ngakho-ke ngokubaluleka nokuzibophezela kuyadingeka ukwelapha umsoco wakho, kuyilapho ungafaki ekudleni kwakho konke okuthosiwe, okuthosiwe, amafutha futhi ukhohlwe nge-ayisikhilimu kanye nelekholethi ngokuphelele.
Isisombululo esifanele kunazo zonke futhi esifanele inkinga yokuqeda umuntu emaphilini angaphezu kokuqala ukudla okusanhlamvu ngaphandle kokufaka ibhotela, ushukela nosawoti. Ukudla kwe-Pearl kuhlinzeka ngokusetshenziswa ngokuqondile kwebhali leparele ekudleni. Le phalishi ibhekwa njengenye yezishibhile, futhi yenziwe ngamabele okusanhlamvu. I-Perlovka idume ngokuqukethwe kwayo ephezulu ngezinto eziwusizo, kuhlanganise nensimbi, ithusi, ama-manganese, i-magnesium, i-phosphorus ne-calcium. Ngaphezu kwalokho, umzimba wakho ungasetshenziswa ngamavithamini E, PP kanye neqembu B. Futhi i-amino acid lysine ingakunika umuzwa wokugcwalisa okugcwele nokugcwele.
I-barley yeParele iyasheshisa inqubo yokukhiqizwa kwe-collagen, ngakho awukwazi nje ukulahlekelwa isisindo kuphela, kodwa futhi uvuselele. Ngempela, sonke siyazi ukuthi i-collagen yinto ephethe isimo sangaphandle sesikhumba sethu. Kwenza kube lula, buthambile, bushelelezi futhi kusekele intsha.
Ibhaluni leParele lihlobo lwe-kernel yebhali okusanhlamvu okwenziwe ngokucubungula, kodwa futhi linemvilophu yezinhlamvu. Ngenxa yalokho, ibhali lensiza liwusizo kakhulu emzimbeni womuntu. Abantu abaningi bacabanga ukuthi i-porridge porridge inzima kakhulu ukugaya ngomzimba, kodwa empeleni akuyona eqinisweni, ngoba ngisho nezinsana zingayisebenzisa ekudleni futhi zicebise umzimba ngamavithamini nemithi ewusizo.
I-pearl ibhali inamaprotheni, ngenxa ye-whichorganism ingabhekana nokuhlukunyezwa okuhlobene nezidlo zokudla noma zangaphandle. Ngaphezu kwalokho, nge-perlovke kukhona i-fiber, ehlanza umzimba wonke we-toxin kanye ne-toxin, futhi lokhu kubaluleke kakhulu ukubeka amadivaysi emathunjini ngendlela efanele.
Ukudla okungaphezulu ukuthi akudingi izindleko eziningi futhi ngesikhathi esifanayo kunikeza imiphumela emihle kakhulu. Konke okudingayo ibhali lemanzi neperele.
Isikhathi sokudla siyizinsuku ezinhlanu. Ngalesi sikhathi, kufanele uphuze amanzi amaningi, kodwa kufanele ukhumbule ukuthi ama-teas nama-juice afundeki. Ngesikhathi sokudla, kunconywa ukuba uphuze amanzi ahlanzekile kuphela amaminerali. Yiqiniso, ukudla okunjalo kudinga umzamo omkhulu, ngoba ungcono kakhulu futhi unzima, akuwona wonke umuntu oyokwazi ukumelana nayo. Kodwa emva kokudla kwakho sekuphelile, uzokwazi ukubona ukuthi ushintsho lushintshwa umphumela omuhle ngendlela yokusebenzisa amakhilogremu engeziwe.
Ochwepheshe-izondlo ezidla ngokuziphendulela baphendule ngokucophelela ohlelweni lweparele lokulahlekelwa isisindo futhi babalwa ngokucacile ukuthi i-kilogram eyengeziwe nsuku zonke izohamba kanjani. Lokhu kwenza ukwazi ukwazi ukuthi isivinini sesisindo sithathwa nini.
Izinsuku ezimbili noma ezintathu zokuqala isisindo sinciphisa ngenxa yokuhlanza amathumbu nokukhipha uketshezi okwedlulele emzimbeni, futhi emva kwalokho usuku nosuku ungalahlekelwa yi-kilogram eyodwa, ngaphezu kwalokho, amafutha angaphansi kwamandla ayohamba, futhi yilokho owesifazane ohlezi nadiete ofuna ukufeza .
Indlela yokupheka i-pearl gruel?
Kumele ukhumbule ukuthi ibhalile leparele liphuzwa isikhathi eside, ngakho-ke kufanele lijijiswe ngamanzi kusengaphambili-amahora ayishumi nambili (200 amagremu wezitshalo ngalinye ilitha lamanzi ahlanzekile). Kakade i-croup evuvukala ilandela amanzi (cishe ama-glasses amabili noma amathathu) bese upheka ngokushisa okuphansi isikhathi esingangehafu yehora. Khumbula ukuthi uma upheka i-croup ngaphandle kokungena ngaphambi, uzodinga isikhathi esiningi. Ngemuva kokuthi i-kashabudet isilungele, yisuse epulangwe bese uyifaka ithawula ukuze "ifinyelele". Uma kungazelelwe ukhohlwe ukugoqa i-croup yobusuku, kufanele ukuthi ugeze futhi uchithe ngamanzi abilayo kakhulu futhi emva kwamahora ambalwa uzokwazi ukulungisa. Qaphela iqiniso lokuthi iphalishi emva kwe-porridge landa ngevolumu endaweni ethile izikhathi ezinhlanu.
Ukudla kwe-Menuperformal - inketho yokuqala
Uhlobo lokuqala lwamamenyu we-pearl lokudla luyi-woolly, ngoba alukho okuhlukahlukene kuwo. Kuzo zonke izinsuku ezinhlanu, kufanele udle iphariji kuphela, opheka emanzini ngaphandle kokufaka usawoti, amafutha ashukela. Ngaphezu kokusanhlamvu, ungaphuza izidakamizwa ze-herbal, ama teas aluhlaza ngaphandle koju lwe-isahara, kanye namanzi amaminerali.
Ukudla kwe-Menuperformal - ukhetho lwesibili
Lokhu okuhlukile kokudla kwe-pearl kuhlinzekela ukudla okungeyona into enhle kakhulu, ngoba ingadluliselwa ezinsukwini eziyisikhombisa.
Ukuze uthole ukudla kwasekuseni, ungadla i-pearl gruel ngaphandle kwamafutha kasawoti, kodwa ungangeza i-apple eyodwa egayiwe noma ama-crayfish omisiwe.
Kwasemini, kufanele udle i-pearl gruel ngaphandle kwamafutha nosawoti, amagremu angu-100 enhlanzi noma inyama kanye nesaladi yemifino ehlanzekile.
Ukuze uthole isidlo sakusihlwa, ungadla ama-gramu angu-250 we-kefir nama-gramu angu-100 we-fat-fat cottage shizi. Ungaphuza kuphela amanzi angabonakali ngamaminerali kanye netiye eluhlaza ngaphandle kokungeza.
Ukudla kwe-Menuperformal - inketho yesithathu
Abesifazane abaningi abanamathele ekudleni, okuhlinzeka ngokudla, kodwa bakhetha izinketho zabo zokunamathela ohlelweni lokudla okunjalo. Abanye abantu bapheka iphalenda bese bengeza izinongo kuso, isibonelo, thyme, curry, pepper. Ngaphandle kwe-porridge, badla izithelo ezimnandi nezomuncu, nemifino.
Ochwepheshe abazange nje benze uhlu lwamabhaluni weparele lwemikhiqizo ewusizo kakhulu, ngoba akusizi nje kuphela ukusindisa amaphilisi engeziwe, kodwa futhi kuthuthukisa impilo. Ngaphezu kwalokho, i-micronutrients, ecebile ebhali, inomphumela omuhle wokugaya. Lokhu kuphinda kusho ukuthi uma unamathele ekudleni kungakapheli izinsuku eziyisikhombisa, ngakho-ke ayinakho ukuphikisana. Ngokuphambene nalokho, kuyasiza kakhulu. Nokho, ngaphambi kokuba uhlale kulokudla, kanye nanoma yikuphi ukudla okunye kufanele uxhumane nodokotela. Ngokuvamile, lokhu kudla akunconywa kaningi ngaphezu kwezinyanga zonke ezinyangeni eziyi-1.5-2.
Abesifazane abaye bazama lesi simiso sokulahleka kwesisindo bathi baye bazama ukudla okuningi, kodwa kuphela ibhali lensiza linganikeza umphumela oyifunayo, ngaphezu kwalokho, amaqabunga amaningi amafutha emathunjini, emathangeni nasemathangeni. Yiqiniso, kulo lonke lokudla, kudingeka uhlangane futhi ukhuthazelele i-monotony, kodwa umphumela uyabaluleka. Eqinisweni, bonke abamele abesilisa bezocansi bathi ngukuthi nsuku zonke kukhona i-kilogram yesisindo esiningi, futhi ngemva kokuphela kokudla, isisindo asibuyanga. Abanye besifazane bathi yi-perlovodite eyabasiza ukuba babeke umzimba ngokuhlelekile ngemuva kokuzalwa. Yiqiniso, ngaphezu kwalokho i-diyvesklyuduetsya iphinde ihlanganyele emidlalweni.
Ngifisa sengathi inhlanhla!
Lishisa isisindo ngosizo lokudla kwemifino
Ukuzivocavoca nge-hoop yokulahlekelwa isisindo
I-egg-honey edla izinsuku ezingu-3
Izidlo eziphumelela kakhulu zesisu
Yimuphi umbala wezingubo lokhu
Imibono elula yeqembu
Izitayela zefashini entwasahlobo nasehlobo ka-2011
Mayelana nobomvu obomvu waseBrussels griffon
Ungadliwa izitsha eziwusizo ngenhliziyo
I-Apple cider uviniga nge-veicic veins
I-Horoscope yezinhlanzi-Abesifazane ngo-Ephreli 2017
Udokotela wemvelo jikelele: alfalfa nezinzuzo zayo emzimbeni
Ukubeletha kuyindlela yokuqala yokuxhumana nomntwana.
Siyakuhalalisela kumngane wakho ngoMashi 8
Kungani le nyoni ingqongqoza efasiteleni?
Ukuzilibazisa, ukuzilibazisa kwezingane